Bal Daawo Sawirada Yaabka Fanaan Calanka Soomaaliyeed si degan u baraya Milatari reer Yurub ah oo aad u hubeeysan !! - iftineducation.com
Bal Daawo Sawirada Yaabka Fanaan Calanka Soomaaliyeed si degan u baraya Milatari reer Yurub ah oo aad u hubeeysan !!
iftineducation.com – Ma ahan sahal mana fududa in ciidamo aad u hubeeysan oo reer Yurub ah lagu qasbo inay Calanka Soomaaliyeed kor u qaadaan waliba mararka qaar laga dul taago dabaabaadkooda dagaal waxaana fursadaan ka faaideeystay mid ka mid ah Fanaaniinta Soomaaliyeed.
Fanaanka Omar Sii Sii Somband oo horay looga bartay heesaha wadaniga ah iyo kor u qaadista karaamada iyo sharafta Calanka Soomaaliyeed ayaa markaan waxa uu noqday mid qarsan waayay jaceylka uu u qabo Calanka Soomaaliyeed kaas oo ku guuleeystay in uu Calanka Buluuga ah ka taago gawaarida iyo dabaabaadka Milatari reer Yurub ah oo aad u hubeeysan.
HOOS KADAAWO MUUQAALKA SAWIRADA:
Daawo Gabdho soomali oo markaan kasoo daray waxey sameynaayaan